Fil d'actualités du 16/05/2019
16/05/2019 - 13:00 : FIFIDIANANA: Namoaka toromarika sy tondrozotra mahakasika ny dingana samihafa tokony hatao amin'ny resaka fifanolanana ara-pifidianana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC.
16/05/2019 - 11:30 : FITATERANA: Hosaziana handoa honitra 100 000 hatramin'ny 1000 000Ariary ireo mpitatitra mandika ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana sy tsy manaja ny bokin'andraikitra ankoatra ny mety ho fidirana am-ponja.
15/05/2019 - 11:00 : BIANCO: Tafiakatra 60 ireo kandida te ho Filohan'ny Bianco, izay tokony ho fantatra ny 23 jona aorian'ny fantina ataon'ny komity manokana hivoahan'ny anarana 3 hisafidianan'ny Filoha
15/05/2019 - 10:30 : TOAMASINA: Namoahan'ny Prefektiora taratasy fampiatoana ny orinasa HITA (Huile Industrielle de Tamatave) noho antony ara-tontolo iainana.
15/05/2019 - 10:00 : KARAMA FARANY AMBANY; Tsy mbola hihantra ho an'ny mpiasam-panjakana ilay 200 000Ar noho ny fanadiovana mbola hatao amin'ny alalan'ny rindram-baiko Augure
15/05/2019 - 09:30 : SAMBIRANO: Ny 20 mey izao no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila.
14/05/2019 - 11:00 : TETIBOLAM-PANJAKANA : Andrasana anio amin’ny Filankevitry ny minisitra ny famoahana ny antsipirihiny mahakasika ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana.
14/05/2019 - 10:30 : TOAMASINA: Olona 3 mianaka hita faty tao an-tranony tao Dépot 4e Tamatave omaly hariva. Efa namofona sy nisy olitra ireo razana.
13/05/2019 - 12:00 : MARC RAVALOMANANA: Any Manjakandriana ny tenany amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny vahoaka, ka ankoatra ny fampielezan-kevitra dia mijery hiragasy miaraka amin'ny vahoaka ao an-toerana.
13/05/2019 - 11:30 : FAHA-47 TAONAN'NY 13 MEY 1972: Tonga maro ireo mpikatroka TIM nanatitra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjan'ny 13 mey nanatitra voninkazo ho fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tamin'ny tolona nataon'ny mpianatra ny 13 mai 1972.
Archive du 20181019
Marc Ravalomanana “Olon’Andriamanitra aho ka tsy hamitaka anareo”
Ny Faritra Vatovavy Fitovinany sy Lokomby, Faritra Atsimo Atsinanana no nanaovan’ny kandida laharana-25 Marc Ravalomanana fampielezan-kevitra omaly Alakamisy 18 Oktobra 2018 maraina.
Afera maloto Azo atao ny managadra olona ambony
Nanao fanamarihana mahakasika ny andraikitra sahanin`ny Fitsarana Ambony (HCJ) ny mpitsara sady mpahay lalàna, Imbiky Herilaza. Nilaza izy fa tafiditra amin`ny fametrahana tany tan-dalàna ity rafi-pitsarana ity.
Distrikan’Andramasina Nosomparana fa maka an’i Dada ihany
Tafiditra tsara ao anatin’ny fampielezankevitra amin’izao fotoana ny Distim Andramasina, hoy ny filohany, Herinjato Rabetokotany.
Depiote sy TIM aryKMMR Boriborintany faha-6 Miara-mientana amin’ny fampandaniana ny kandida n° 25
Ankoatra ny fitetezana tokantrano na ilay « porte à porte » natao ho fampandaniana ny n°25 Marc Ravalomanana tao amin’ny fokontany Antanety Sud sy
Andry Rajoelina Menatra mitondra an’ireo goaikantitra ?
Fa maninona no tsy entin-dRajoelina miaraka manao fampielezan-kevitra aminy ireo goaikantitra na dinaozoro politika ao anatin’ny Armada, izay efa nilaza fa hanohana azy ?
Andry Rajoelina Lasa mpangala-tahaka sisa…
Kandida sokajiana ho matanjaka sy mety hifampitady mihitsy i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina amin’ny fifidianana hatao amin’ny 7 novamba izao.
Herisetra sy hetraketraka ara-pifidianana Namoahana torolalana manokana
Omaly alakamisy 18 oktobra no navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny torolalana ho an’ny olom-pirenena ho fiaraha-mientana amin’ny fitandroana ny filaminana mandritry ny fifidianana.
Tafiakatra ny dingana manaraka ny Barea Ekipa kitra Malagasy, mijoro ho lehilahy Hitondra avo ny faneva, horaiketin'ny tantara Barea Malagasy, Barea an'i Gasikara.
Fanapahana ala eto Madagasikara Arahi-maso amin’ny alalan’ny fampiasana teknolojia avo lenta
Noho ny fandrosoan’ny teknolojia dia maimaimpoana ny sary azo avy amin’ny zanabolana Landsat ary maro hatrany ny karazana sy antontam-baovao izay azo ao amin’ny tranonkala.
Olona nitora-bato ny Barea Tsy mpianatra ary tsy mponina eny Vontovorona
Mitohy hatrany ny olana sedrain'ireo mpianatra eny amin'ny pôliteky Vontovorona.
Fiatrehana ny fahavaratra Efa vonona ny APIPA na dia…
Tsy vita ny asa tokony ho natao isan-taona. Manarina tsikelikely ny tao anatin’ny 2 na 3 taona ny APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo),
Basikety Tompondaka nasionaly N1 A Ny Cosfa sy ny As Victoire no hisantatra azy anio
Ny ekipan’ny Cosfa Analamanga sy ny As Victoire Boeny ao amin’ny vondrona B lehilahy no hisantatra ny fifanintsanana dingana faha-2 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja basikety sokajy N1 A lahy sy vavy
Kitra vehivavy sokajy U 16 Ny Maitsovolo sy Fc Prescoi no hanao famaranana
Ny ekipa zatovovavin’ny Maitsovolo avy any Matsiatra Ambony sy ny Fc Prescoi avy any Vakinankaratra no tafita hiatrika ny lalao famaranan’ny Tournoi National ny baolina kitra vehivavy tontosaina eny amin’ny kianjan’i Carion ankehitriny.
Hanakorontana indray hoe e ?
Hamarana ny herinandro faharoan’ny fampielezan-kevitra ho an’ireo kandida filoham-pirenena isika.
Taham-pahafahana bakalorea Niakatra 3% ny teto Antananarivo
47,47% no taham-pahafahana bakalorea ho an’Antananarivo manokana, raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny ofisim-pirenena misahana ity fanadinam-panjakana ity omaly.
Rolland Raelison Hankalaza ny faha-80 taonany eto Madagasikara
Mandalo eto an-tanindrazana indray i Rolland Raelison ankehitriny ka hankalaza ny tsingerin-taona faha-80 nahaterahany amin’ity 2018 ity izay mifanandrify ihany koa amin’ny faha-60 taona nanaovany rindrakira voalohany teto Antananarivo.
TSY HIHEMOTRA NY HFI
Tsy hihemotra ny HFI na dia nogadraina aza ny mpitarika azy ireo dia i Pety Rakotoniaina izany.
Rehefa resy lahatr’ireo mpanjifa amin’ny fiakaran’ny saran-dalana ireo mpitatitra dia any amin’ny fandraisana mpandeha
Asa an-tsambo Malalaka ny tsena ho an’ny Malagasy
Notanterahina tetsy amin’ny Pavé Antaninarenina omaly ny fifantenana farany ireo Malagasy afaka hanam-bintana ho tonga mpiasa anatin’irony sambo mpivezivezy na “Bateau de croisière” irony.
Fiainana ara-pananahana Ny 37 %-n'ny Reny Malagasy no miteraka zaza tsy niriana
Mitombo isa hatrany isika Malagasy. Tsy maharaka izay anefa ny fiakaran'ny toekarem-pirenena, hany ka miaina anaty fahasahiranana hatrany ny isan-tokantrano.
Ady amin’ny fanilikilihana sy fahantrana Tokony ho isan’andro, hoy ny ATD Quart monde
Isaky ny 17 oktobra no hankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny fahantrana. Omaly kosa no namaranan-dry zareo avy eo anivon’ny fikambanana ATD Quart monde izany tetsy Analakely.
Orinasa iray eny Ankadimbahoaka Mamono mpiasa ilay tompon’andraikitra
Orinasa lehibe iray manana ny maha izy azy dia ireny “zone Industriel” eny Ankadimbahoaka eny no ahitana toe-javatra mamohehatra miendrika tsy fanajana zon’olombelona, hoy ny fampitam-baovao iray.
Fitsarana Ambony Tafapetraka ny mpikambana vaovao
Natomboka tamin`ny fomba ofisialy omaly ny asa eo anivon`ny Fitsarana Ambony (HCJ) satria tafapetraka ireo mpikambana vaovao, miisa telo (3) izay nanao fianianana tetsy amin`ny Fitsarana an-tampony Anosy.
Tany tan-dalàna Tsy misy eto amintsika
Misavoritaka tanteraka ny fiainam-pirenena ankehitriny. Eo aloha ny savorovoro momba ny lisi-pifidianana izay miteraka adihevitra be.